Mobile နည်းပညာလေးတွေကို ဒီမှာစုစည်းထားတယ် ~ IT Guide Myanmar
Huawei U8800 ကို Android 4.0 icecream sandwich သို့ မြင့်ချင်သူများအတွက်
အခုတင်မှာက custom rom ပါ ။ root လုပ်ပြီးထားတဲ့ ဖုန်းတွေပဲ သုံးလို့ရမှာပါ။
အဆင့်ဆင့်ကို မှန်အောင်လုပ်သွားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့အကုန်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၁… အရင်ဆုံး ဖုန်းကို root လုပ်ထားရပါမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအားလုံးကို backup လုပ်ထားပါ။
၂…. ပြီးရင်တော့ ပထမဆုံး CWM တင်ပါ။ CWM တင်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ဒီနေရာမှာသွားပြီး recovery.img လေးကိုဆွဲလိုက်ပါ။
၃…. ပြီးရင် ကွန်ပျူတာမှ တဆင့် ဆွဲလို့ရလာတဲ့ recovery.img လေးကို SD card ထဲထည့်ပါ။
ဆက်ပြီးသွားရမှာက root exploer ထဲကိုပါ။ root exploer ထဲရောက်ရင် new folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။ ဆောက်ရမယ့် နာမည်က .cust-backup/image ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ထဲမှာပဲ SD card ထဲမှာ ရှိတဲ့ recovery.img လေးကို ကူးလာပြီး ခုနက အသစ်လုပ်ထားတဲ့ .cust-backup/image ထဲ replace လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် setting >>>> application>>> fast boot က အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်ရင် Power buttom+Volume up ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ CWM ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။။ ပထမအဆင့်ပြီးပါပြီ။
၄ …. ဒါလေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
၅… ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Zip ကို SD card ထဲထည့်လိုက်ပါ။
၆…. CWM ထဲကိုဝင်ပါ။
backup and restore ထဲမှာ backup လုပ်လိုက်ပါ။ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် ကယ်ဖို့ပေါ့
Go back နဲ့ပြန်ထွက်ပါ။ ပြီးရင် mount ထဲဝင်ပါ။ format Data,format Cache,format System တွေလုပ်ပါ။
ပြီးရင်ဆက်လုပ်ရမှာ က advenced ထဲက wipe devil cache လုပ်ပါ။
Go back နဲ့ အပြင်ပြန်ထွက်ပြီး Install SD card.zip ထဲဝင်ပါ။ ပြီးရင် choose Zip from SD ထဲဝင်ပြီး aurora4.0.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ သူ့ဟာသူ အလုပ်လုပ်သွားပြီးရင်တော့ U8800 ဟာ ICS ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ICS 4.0.4 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ root ပြီးသားဆိုတော့ မြန်မာဖောင့်အတွက်က စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။ အဆင်ပြေကြပါစေ/
from သက်နိုင်စိုး/ Mobile store
အရင်ဆုံး android 4.0.3 update firmware ဖိုင်ဒေါင်းလိုက်ပါ
Download ဆွဲပြီးရင် ဖိုင်ဖြေပြီး dload folder ကို 2gb memory card ထဲထည့်ပါ
ပါဝါပိတ် ဘက္ထရီ ၁၀ စက္ကန့်လောက်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ပါ
Vol Up+Vol Down+Power တွဲနှိပ်ပါ
Firmware update လုပ်သွားပါမယ် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး auto reboot လုပ်ပြီးလျှင် ics version ဖြစ်သွားပါပြီ
တကယ်လို့ update complete ဖြစ်ပြီး စက်မတက်လာလျှင် battery ခဏဖြုတ်ပြီး ဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ
Root လုပ်ဖို့ setting>developer option> usb debugging အမှန်ခြစ် ထားရပါမယ်
ဖုန်းဖွင့်ထား usb cable ကြိုးသွယ်ပြီး root-me.cmd ကို run ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် ကီးဘုတ်ကနေ ခလုတ်တခု နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
သုံးစက္ကန့်အတွင်း app list ထဲမှာ super user ပေါ်နေတာကို တွေရပါမယ်
Root လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ
Myanmar fonts နဲ့ keyboard ကတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တာကို ထည့်လိုက်ပါ
Bo Sunny Lwin ဒီနည်းပညာတွေအားလုံး ကျုပ်ရေးသားထားတာမဟုတ်ပါ။ ရေးသားသူနာမည်လေးတွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ပြောပါဗျာ။
Huawei C8812/U8818 ကို Root လုပ်နည်း & မြန်မာ Font ထည့်နည်း
ကျွန်တော် U8818 နှင့် C8812 Root လုပ်နည်း အတူတူပဲမို့ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ချပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မိမိစက်မှာ မိမိဖုန်း Driver တင်ထားပါ။ ပြီးလျှင် USB Debugging ကို Enableလုပ်ဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting > Development > USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
Super Click.rar ကို Extra Here လုပ်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ Super Root ဆိုတဲ့ Folder ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ခုနက Logo တက်နေတဲ့အတိုင်း USB ကြိုးဖြင့် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်လိုက်ပါ။
Volume down+up ကိုအသုံးပြုပြီးReboot System Now ကို Power Button နှိပ်ကာ ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Rebootကျသွားပါမည်။
မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့အတွက် Myanmar Mobile Application Store ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ Font Changer ကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။ Font Changer.apk နဲ့ MyanDroid Soft Keyboard.apk ကို မိမိဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် နှစ်ခုလုံးကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ Font Changer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Superuser Requested ! လို့မေးလျှင် Grantကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဇော်ဂျီဖောင့်ပြောင်းရန် ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သူ့ကသူ Reboot လုပ်နေပါမယ်။ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာလျှင် မြန်မာလို မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်ဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting > Language & Keyboard > ထဲမှာ MyanDroid Soft Keyboard ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ရမရ စမ်းချင်လျှင် Notepad ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ စာရိုက်မယ့်နေရာမှာ ခပ်ကြာကြာလေး ဖိလိုက်ပါ။ Input Methodပေါ်လာပါမယ်။ အဲမှာ MyanDroid Soft Keyboard ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် စာရိုက်ကြည့်ပါ။ မြန်မာလို မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy S2 I9100G ကို Android 4.1.1 Jelly Bean သို့ CyanogenMod
10 ဖြင့် upgrade လုပ်နည်းလေးပါ
အောက်က Link နှစ်ခုကို Down ပါ။
Wipe data/factory reset လုပ်ရမယ့်အဆင့်ပါတဲ့အတွက် data တွေ backup လုပ်ထားပါ။
1. Download လုပ်ထားသော zip file နှစ်ခုကို copy ကူးပြီး ဖုန်းရဲ့ internal SD card ထဲကိုထည့်ပါ။
2. ဖုန်းကို power ပိတ်ပါ။
3. Volume Up+Home+Power button တွဲနှိပ် ပြီး Recovery Mode ၀င်ပါ။
4. Wipe data/factory reset ကိုရွေးပါ။ YES ကိုနှိပ်ပါ။
5. Install ZIP from SD card ကိုရွေးပါ။Choose ZIP from SD card ကိုရွေးပါ။ 1 မှ Download လုပ်ထားသော CM10 ROM.zip ကိုရွေးပါ။YES ကိုနှိပ်ပါ။5မိနစ်လောက်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
6. ပြီးရင် main menu ကိုပြန်သွားပါ။Install ZIP from SD card ကိုရွေးပါ။Choose ZIP from SD card ကိုရွေးပါ။2မှ Download လုပ်ထားသော flash gapps-jb-20120717-signed.zip ကိုရွေးပါ။YES ကိုနှိပ်ပါ။5 မိနစ်လောက်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. ပြီးရင် main menu ကိုပြန်သွားပါ။Reboot system now ကိုရွေးပါ။ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက် 10 မိနစ်လောက်စောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ jelly-bean စားသုံးနိုင်ပါပြီ..:)
from mobile store မိုဘိုင်းစတိုးမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Android ဖုန်းပေါ်မှာ root မဖောက်ပဲမြန်မာလိုမြင်ရအောင်လုပ်နည်း
Android ဖုန်းတွေမှာ root မဖောက်ပဲ မြန်မာလိုမြင်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ
1.>ပထမဆုံး GOSMS Pro ကို သွင်းထားရမှာဖြစ်တယ်
2.>သွင်းပြီးပြီဆိုရင် အခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ theme ကိုသွင်းလိုက်ပါ https://www.dropbox.com/s/7dqigf7etbxd5s2/GO%20SMS%20Pro%20Star%20Theme%20v1.0.apk
3.>နောက် အောက်က font ကိုဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ https://www.dropbox.com/s/0ecqxa4zb1g3nt2/gofonts_yueyuan.ttf
4.>ပြီးလျှင် ရလာသော font ကို sd ကဒ်ထဲထည့်လိုက်ပါ
5.>အဲ့ဒီဖောင့်ကို file manager တစ်ခုခုနဲ့ GOSMS>fonts ဆိုတဲ့ဖိုဒါအောက်ကိုရွှေလိုက်ပါ
6.>ပြီးလျှင် GOSMS ကိုဖွင့်ပြီး စောစောက star theme ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါ
မြန်မာလိုတွေအကုန်မြင်ရပါပြီ ကီးဘုတ်ရှိရင် ပြန်ရိုက်လို့လည်းရပါတယ် ဒါပေမယ့်မြန်မာလိုတော့ ရိုက်နေချိန်မှာမမြင်ရပါဘူး send လို့နှိပ်ပြီးသွားမှမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
from Thura Soe in Myanmar Mobile Users Group (Files) · ကိုသူရစိုး မိုဘိုင်းစတိုးမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဂျိုးဂျာ နှင့် ကိုဝင်းထွဋ်အောင်တို့ထံမှ ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ
Myanmar Mobile Users Group (Files) ·
HTC ဖုန်းများ Root မလုပ်ပဲ Zaw Gyi Font သွင်းနည်းကျွန်တော် ဒီနည်းနဲ. HTC Sensation XE, HTC Desire HD နဲ. HTC ONE X မှာ စမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။
အားလုံးက Android Version 4.0.3 မှာအဆင်ပြေကြတယ်။
ကျန်တဲ့ Version မှာအဆင်ပြေလား မစမ်းရသေးပါဘူး။တစ်ကယ်လို.တစ်ခြား Android Version မှာရခဲ့ရင် Report လေးပေးကြပါ။
Download HTC Font (china font Modify) >>>>http://www.mediafire.com/?bhy9qyf3omf75yl (or) http://www.mediafire.com/?yhreyswhn8bzfnx
၁။ www.htcdev.com မှာ Bootloader Unlock လုပ်ပါ။
မှာ ClockWorkMod သွင်းနည်းနဲ.ClockWorkMod သွင်းပါ။
၃။ HTC Font ကို Download ဆွဲပြီး Memory card (SD) ထဲသို.ထည့်ပါ။
၃။ Bootloader ကနေ Recovery မှ ClockWorkmod သို.၀င်ပါ။
၅။ ClockWorkMod>Install zip from sdcard > Chose Zip From sdcard ကနေတဆင့် HTC font.zip
ကိုရွေးပေးပြီး Yes- Install HTC Font.zip ကိုရွေးလိုက်ပြီး Update လုပ်ပါ။
၆။ Done add Zaw Gyi Font(Jogar)! ပေါ်ရင် HTC device Zaw Gyi Font သုံးလိုရသွားပါပြီ !!!!!!!!!!!
၇။ +++++Go Back++++ > reboot system now လေးနိပ် လိုက်ပြီး Reboot ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
အားလုံး OK စိုစိုပြေပြေနဲ. Zaw Gyi Font သုံးလိုရသွားပါပြီ။
Zaw Gyi Keyboard အတွက် Forzen Keyboard
from www.facebook.com/realeyelay ( Jogar )
==== HTC ဖုန်းများ BOOTLOADER UNLOCK လုပ်နည်း ====
ကို ဒီမှာကြည့် ပါ။ များနေလို့မတင်တာပါ။ ပို့စ်တစ်အား ရှည်သွားမယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်။ ====
HTC ဖုန်းများ Recovery Mode ဖြင့် root လုပ်နည်း
၁။ Bootloader Unlock လုပ်ပါ။
၂။ ClockWorkMod သွင်းပါ။
၃။ http://androidsu.com/superuser/ မှာ SuperUser.zipကို Download ဆွဲပါ
ရလာတဲ့ SuperUser.zip ကို Phone SD Card သို.ပို.ပါ။
၄။ HTC ဖုန်းမှ Bootloader > Recovery > ClockWorkMod>Install zip from sdcard > Chose Zip From
sdcard ကနေ SuperUser.zip ကို Install လုပ်ပါ။
၅။ +++++Go Back++++ > reboot system now လေးနိပ် လိုက်ပြီး Reboot ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီနည်းနဲ့ HTC Android ISC Version များအားလုံးလုပ်လိုရတယ်ကျနော် ဒီနည်းနဲ. Sensation Series, One Series , Desire Serise တွေမှာရကြတယ်ကျန်တဲ့ Phone တွေမှာရကြမှာပါ။ အားလုံးက 4.0.3 မှာ Stable ဖြစ်ကြတယ်
ဂျိုးဂျာနှင့် ကိုဝင်းထွဋ်အောင်ထံမှ ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ။
By Bo Sunny Lwin, Htay Hlaing Oo and Paing Linn in Myanmar Mobile Users Group (Files) ·
Huawei Phone တွေရဲ့ Clockworkmod Recovery တွေကို ရှိသလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Custom Rom တွေ တင်လို့ရပါတယ်
Stock Recovery မှာ မပါတာတွေ လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်
ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ Huawei logo တက်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် keyboard ကနေ space bar ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ
ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ Huawei logo တက်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် keyboard ကနေ enter နှစ်ချက်ပေးပါ ဖုန်းက auto restart ကျသွားပါမယ်
မှတ်ချက်-ဒီရဲ့ cwm ကို ics မှာသုံးဖို့ bootloader unlocked ဖြစ်မှ ics အတွက် ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ် အရင်ဆုံး bootloader ကို unlocked လုပ်ပြီးမှ cwm တင်ပါ Credit To Ko Kyat Ka Lay
Bootloader Unlocked လုပ်နည်းက ဖုန်းမှာ usb debuggin on ထားပါ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင် bootloader.exe ကိုcomputer မှာ run ပြီး root အောက်က Unlock Bootloader နှိပ်လိုက်ပါ ဖုန်း retoot ကျသွားပြီးရင် ရပါပြီ
Huawei U8660 ကိုအော်ရဂျင်နယ် Firmware ပြန်တင်ကြမယ်။
By Mc Jojoe in Myanmar Mobile Users Group (Files) ·
မြန်မာဖောင့်ထည့်ရင်း Root လုပ်ရင်း Power ပြန်မတက်တော့တဲ့ Huawei တွေကို
Firmware ပြန်တင်ဖို့ အတွက် ကြိုး စားပြီး Doc ရေးတင်ပေး လိုက်ပါသည်။
အရင်ဦးဆုံး Firmware ပြန်တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Original Firmware လေးကို http://www.mediafire.com/?52ts4y9xdc46yk1 မှာဒေါင်းပါ။ ပြီးရင်ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို ဖြည် ထုတ်လိုက်ပါ။ dload ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။SD card ကောင်းကောင်း တစ်ကဒ် ကို Format ချပြီး ရလာတဲ့ dload ဖိုင်ကို ထည့် ပါ။SD card ကို ဖုန်းထဲပြန်ထည့် ပြီးရင် ဖုန်းမှ Vol down,Vol up နဲ့Power Button ကို ခဏ တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အထက်ပါပုံအတိုင်း Firmware ပြန်တင် ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုပေါ်လာပြီဆို ရင်တော့ ဖုန်းဟာ restart ပြန်ကျ သွားပြီး Firmware ပြန်တင်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
သတိထားရမည်မှာ SD card ကောင်းရန်နှင့် Memory အနည်းဆုံး 1 or2Gb ရှိ ရန်ဖြစ်သည်။
SDcard မကောင်း လျှင် Update Failed ပြတတ် သည်။
By Htay Hlaing Oo in Myanmar Mobile Users Group (Files) · Edit Doc
အရင် Huawei ဖုန်းတွေဟာ Root မလုပ်ပဲနဲ့ မြန်မာ ဖောင့်ကို ထည့်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် CWM ကို တော့ သွင်းလို့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ CWM သွင်းပြီးရင် Root လုပ်ဖို့ လွယ်သွားပါပြီ။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကို Root မလုပ်ချင်သူများအတွက် ဒီနည်းကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ CWM သွင်းလို့ မရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် ဒီနည်းက အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ အခုကျွန်တော် ပြောပြပေးမှာကတော့ Huawei မှာ Root မလုပ်ပဲ မြန်မာစာ၊တရုတ်စာအင်္ဂလိပ်စာများကိုအဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်အာင် ဖောင့်ထည့်သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သော HWMMFont.zip ကိုဒေါင်းရန် >>https://www.dropbox.com/s/hi2hx4dued3xgsg/HWMMFont.zip
၁။ CWM သွင်းနည်း
Huawei ဖုန်းတွေအတွက် CWM ၀င်နည်းကတော့ ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ ဖုန်းအချို့ရဲ့ CWM ကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
CWM ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် တော့ ဖုန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ခလုပ်များကို ပြိုင်တူနှိပ်၍ CWM recovery mode သို့ဝင်ပါ။ (အတိအကျမပြောရခြင်းမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ recovery mode ၀င်နည်းမတူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။)
ပြီးလျှင် install zip from sdcard > choose zip from sdcard > HWMMFont.zip ကို update လုပ်ပါ။
ဖုန်း Reboot ပြန်တက်လာတဲ့ အခါ မြန်မာစာ တွေကို ဖတ်လို့ ရေးလို့ရပါပြီ။ ကီးဘုတ်ကတော့ မပြောတော့ပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာပဲ ထည့်လိုက်ပါတော့။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ....
By Bo Sunny Lwin in Myanmar Mobile Users Group (Files) · Edit Doc
သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ facebook hack တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ စက်ရုပ်အတွက်ပါဒီဆော့ဝဲက အများသုံး wifi တွေမှာ ဖုန်းနဲ့ facebook သုံးနေတဲ့ လူတွေရဲ့ facebook account ကိုဝင် hack လို့ရပါတယ်ချိတ်ဆက်မိသွားရင်တော့ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ facebook account ကို စိတ်ကြိုက် ၀င်မွှေလို့ရပါပြီFree Version မှာ အကောင့်သုံးခုဘဲ ပေးဟက်ပါတယ် ကျွန်တော် unlocker ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Unlocker နဲ့ key ထည့်ပြီးရင် ကြိုက်သလောက် သုံးလို့ရသွားပါပြီ
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင်ပြေကြပါစေ By Bo Sunny Lwin
ဒီမှာသွားကြည့်မှ ရမယ်နော် များနေလို့ မတင်တော့ဘူး သီးခံပါ။
C8800 တွေကို version 2.3.6 တင်ရအောင်
By Lin Lin Shall in Myanmar Mobile Users Group (Files) · Edit Doc
ကျနော့် C8800 ကိုမြှင့်ထားတာ ကာလတခုတော့ရှိပီ....စစပိုင်းကအဆင်မပြေဘူးမှတ်လို့ မတင်ပေးလိုက်တာပါ....ကျနော်ပထမဆုံးရေးတဲ့docမို့လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ...
မရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ ရေးထားတာမို့ ကျနော် အရင်ဆုံးတောင်းပန်ပါရစေ ..... :D
ps >>> firmware တင်နည်းကိုတော့ http://www.myanmarmobileapp.com/?p=2881 ကနေယူထားတာပါ....
<<<<<နည်းလမ်းလေးကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် >>>>>ပထမဦးဆုံး ဒီလင့်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ
အောက်ပါပုံအတိုင်း တတ်လာပါက ဝိုင်းထားသောနေရာကို နှိပ်ပြီး rom file ကိုဒေါင်းပါ
ဒီနာမည်လေးနဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင် ရလာပါလိမ့်မယ်" utf8''华为 C8800 基于官方2.3.6 新界面_新功能_流畅实用_3"
၄င်း ဖိုင်ကို update.zip ဟု အမည်ပြောင်းပီး format ချထားသော sd memory card ထဲ ထည့်ပါ
powerkey + vol up key နှိပ်ပီး recovery mode ခေါ်ပါ တတ်လာပါက install update from SD card ကို ရွေး ပြီး မိမိ သွင်းထားသော update file ကို ညွှန်းပေးပါ အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပါ..... reboot ပြန်တတ်လာချိန်တွင်
မိမိ Device မှာအောက်ပါအတိုင်း update ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မည်။
MMUG မှ ညီတော်၊ နောင်တော်တွေ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ U8825D ရဲ့ Root လုပ်နည်းလေး လာပါပြီ .......
ဒီမှာသွားကြည့်ပါ ။ မိတ်ဆွေ။
Galaxy S2 I9100G ကို Android 4.1.1 Jelly Bean သို့ CyanogenMod 10 ဖြင့် upgrade လုပ်နည်းလေးပါ...:)
By Nyo Lynn Htet in Myanmar Mobile Users Group (Files) · Edit Doc
Do as your own risk=ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ဟိဟိ..:P
1။ iPhone Firmware Update လေးဆွဲပြီးတော့မှပျောက်သွားလျင် ပြန်ရှာနည်း
2။ Computer ပေါ်မှာ apk ဖိုင် logo ဖော်မယ်
3။ Android ဖုန်းအားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်နည်း
4။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်.(Downgrade)လုပ်ခြင်သူများအတွက်... Galaxy Y GT-S5360 from Android 4.1.1 to 2.3.5 version
5။ ကဲဒီမှာ huawei google account add လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Gtalk(voice,video) Huawei တွေအတွက်
6။ Galaxy S2 I9100G ကို Android 4.1.1 Jelly Bean သို့ CyanogenMod 10 ဖြင့် upgradeလုပ်နည်းလေးပါ...:)
7။ HTC Sensation XL ICS 4.0.3 ကို root လုပ်နည်း နှင့် မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းနည်း
8။ htc sensation ICS 4.0.3, hboot 1.27.0000 ကို root လုပ်နည်း၊ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း
9။ JDK & SDK ကိုအသုံးပြုပီး android ဖုန်းတွင် Root လုပ်နည်း နောက်တနည်း
10။ မက်ဆေ့ဂ်ျ မထွက်လျှင်ပြုလုပ်ပုံ.pdf
11။ How to - Root Huawei Ascend P1 - U9200 B113 and B115 (ကိုဖြိုးဝေ)
12။ Google play ဝင်နည်း
13။ MMUG မှအမေးအများဆုံး မေးခွန်း နှင့် အဖြေများ ( andriod user များအတွက်သာ )
14။ အသစ်ထွက် Fruit Ninja v1.8.1 for APPLE
15။ Dual Core, Quad Core ဖုန်းများအတွက် ဘက်ထရီစားသက်သာစေသော CPU Sleeper
16။ samsung network lock ဖြည်ချင်သူများအတွက်
17။ Huawei U8818 ကို ICS 4.0.3 မြှင့်နည်း
18။ Galaxy Note GT-N7000 Root လုပ်လို့မရဘူးဆိုသူများအတွက် Root လုပ်နည်းလေးပါ… Credit to Original Author Max Lee from www.rootgalaxynote.com
19။ Android ICS 4.0 တွေ အတွက် သီးသန့် Google Gmail 4.1.2 [Android 4.0+]
20။ Huawei Android Phones တွေရဲ့ USB Drivers ခေါင်းဆောင်ကြီး
21။ PlayStore မှ application apk file များကို ကွန်ပျူတာထဲသို့ တိုက်ရိုက် Download လုပ်ချင်သူများအတွက်
22။ Galaxy S3 i9300 Root လုပ်လို့မရဘူးဆိုသူများအတွက် Root လုပ်နည်းလေးပါ… Credit to Original Author Max Lee from www.galaxys3root.com
ကဲဗျာမိတ်ဆွေများမိမိသိလိုသည်များကို ရှာဖွေမွှေနောက်နိုင်ပါစေဗျာ။ မိုဘိုင်းနည်းပညာနှင့်ပါတ်သက်လို့
ကတော့ www.myanmarmobileapp.com မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းတွေလည်းမနည်းပါဘူး။
Android ဖုန်းသုံးစွဲသူတိုင်း ဒီဆိုက်ကို ရောက်ဖူးကြမှာပါ။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများလည်း။ ရောက်ဖူး
တော့မှာပါ။ သွားရင်ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်အရာမဆိုကိုယ်က ရချင်စိတ် သွားချင်စိတ် လုပ်ချင်စိတ်လေးရှိမှရမှာပါ။
ထိုင်နေရုံနဲ့မရောက်ဘူး ကလစ်ကြည့်မှရောက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ဘူးလား ဒါကခရီးသွားခြင်းမဟုတ်ဘူးလေ
ကွန်ပျူတာတို့ ဖုန်းတို့နဲ့သုံးတာဆိုတော့ တောက်ကြည့်မှ ကလစ်ကြည့်မှ ရောက်မယ့်ခရီးပါ။ ဟား ဟား
ကဲသွားပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်ဖူးချင်သပါ့ဆိုရင်ဖြင့် ဒီကိုကလစ်လိုက်ပါ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲဗျာ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ရှာဖွေမွှေနောက်နိုင်ပါစေ။ အင်တာနက်လိုင်းလည်း ကောင်းပါစေဗျာ။
2012.9.8 ရက်အမှတ်ရ။ မိုးကောင်းကင် ဖောင်းပြင်။ လာလည်ကြသည့်မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
ပင်မ နေရာမိုဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့။ နာမည်မထည့်မိတာများရှိရင် ခွင့်လွတ်သီးခံပေးကြပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး နာမည်
လေးတွေ ထည့်ပေးပါတယ် သတိမေ့လျော့ ပေါ့ဆမိတာများရှိရင် မိမိနည်းပညာကို ဦးနှောက်ဖောက်စားတယ်
လို့ သဘောမထားဘဲ ဒို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက် ကိုယ်တတ်သလောက် သင်ပြတာလို့ သဘောထားနိုင်
ပါစေ။ ကိုယ့်ပညာကို သူများရစေချင်လို့ ကြည့်စေချင်လို့ တင်တယ်လို့ဘဲ သဘောထားကြပါဗျာ။ ကျုပ်လည်း
ကိုယ်တတ်သလောက် အဆင်ပြေအောင် ဘာငွေကြေးမှ ယူပြီးကြော်ငြာတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်သုံးသလို
သုံးစေချင် ရစေချင်ယုံသက်သက်ပါ။ မိုဘိုင်းနည်းပညာနှင့်ပါတ်သက်လို့ ကျုပ်မှာ သိပ်မတတ်ပါဘူး။ များသော
အားဖြင့် မိုဘိုင်း Mobile app Group ကယူထားကူးထားတာလေးတွေက များတာပါ။ သူတို့ဖေ့ဘုတ်ကလည်း
ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပို့စ်တွေနောက်ကို လိုက်ရတာမလွယ်ကူပါ နေ့အစဉ်အသစ်သစ်တွေ တင်နေတော့ အဟောင်းလေး
တွေက အတော့်ကို စောင့်ဆိုင်း ဆွဲတင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို စောင့်ဆိုင်းဆွဲတင်ပြီ လိုအပ်မည့် မိတ်ဆွေများ အသုံး
၀င်မယ်လို့ ထင်တဲ့အရာလေးတွေကို ကူးထည့်ထားတာပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ မိုးကောင်းကင် အုန်းသာပို့စ်တင်ချိန် 9:43:00 PM